Orinasa ambongadiny voajanahary mainty slate fromazy board miaraka amin'ny Stainless vy tahony
Nampidirina soa aman-tsara tao anaty sarety ity vokatra ity!
Jereo ny sarety fiantsenana
Hiverina any amin'ny Shopping Hiroso amin'ny fandoavam-bola
Alibaba mpamatsy slate plant marker garden label
Sarimihetsika sary rindrina vita amin'ny vato voajanahary voajanahary
Ambongadiny ambongadiny vato tanimanga marika amin'ny Stainle ...
fo endrika vato etikety zavamaniry marika hazo etikety garde...
Santionany maimaim-poana ambongadiny fotsy marbra Wood coaster Eco-...
Orinasa avo lenta marbra hazo sary frame High ...
Shrinkwrap/boaty volontsôkôlà/boaty fanomezana Packaging slate chalkb...
Slate plate slate chopping board Factory vaovao Sales W ...
China orinasa ambongadiny marbra sy hazo chees ...
Haingo Antique malaza indrindra DIY Modern Ha ...
China Factory Cosen mivantana ambongadiny 2 Tier Slate Ca ...
Tasting Plate kojakoja vita amin'ny tanana ambongadiny
Trano sy zaridaina asa tanana Sakafo Marble Dessert...
Factory ambongadiny voajanahary mainty slate fromazy board ...
Personalized kanto Boribory somary lavalava Cosmetic Jewe...
Sisiny voajanahary Hexagon Slate manompo lovia miaraka amin'ny Cooper ...
Board fromazy mainty slate voajanahary amidy ambongadiny
Top Choice Luxury Square Marble Wooden Coaster Ho an'ny D...
Ao amin'ny antsy antsy fromazy dia manana ny antsy fromazy rehetra ilainao, na fromazy Brie na fromazy Parmesan tena mafy. Amin'ireo antsy fromazy ireo dia afaka mankafy azy mora foana ianao. Ny tahony hazo oaka dia manampy endrika tsara tarehy, ary izy ireo no mampiavaka ny fety fromazy.
Ny antsy tsirairay ao amin'ny kitapo telo misy antsika dia manana kalitao manokana, ka mahatonga ny fanapahana fromazy ho mora toy ny manapaka pie. Ny lelany tery amin'ny antsy fromazy malefaka dia afaka manakana ny fromazy malefaka tsy hiraikitra amin'ny antsy. Ny antsy fromazy malefaka ka hatramin'ny antonony mafy dia afaka misoroka ny fikitihana ihany koa, satria ny endrika boribory mitovitovy amin'ny fromazy Soisa dia tena maranitra ary tsy hiforitra rehefa tapahana mafy.
Ny kitapo kely misy efatra dia mora kokoa. Izy ireo dia mahafeno ny filana rehetra manomboka amin'ny fromazy azo zaraina hatramin'ny fromazy mafy. Izy ireo dia mety indrindra amin'ny fandravahana ny latabatra fanandrana fromazy. Raha tsy betsaka ny “populaire chees” manodidina anao dia ho anao koa izany. Vokatra manokana manokana tena mampitolagaga.
Sakafo hariva Karazana:
Lovia sy vilia
Toeram-pisakafoanana sy trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, serivisy sakafo haingana sy azo alaina, fivarotana sakafo sy zava-pisotro, fivarotana manokana, famokarana sakafo sy zava-pisotro, fivarotana TV, fivarotana lehibe, dite bubble, fisotroana ranom-boankazo sy smoothie, tsena lehibe, trano fandraisam-bahiny, fivarotana entana, zava-manitra ary Fanamboarana fitrandrahana, fivarotana zava-mahadomelina, trano fisotroana kafe sy kafe, fivarotana fihenam-bidy, fivarotana e-varotra, fivarotana fanomezana, labiera, divay, fivarotana toaka, fivarotana fahatsiarovana
Miverina any an-tsekoly, Fanomezana, Fanomezana raharaham-barotra, Camping, Travel, fisotroan-dronono, fety, Diplaoma, fanomezana, fampakaram-bady
Fetin'ny mpifankatia, fetin'ny reny, zazakely vaovao, fetin'ny ray, fetin'ny Eid, Taom-baovao sinoa, Oktoberfest, Krismasy, Taom-baovao, Andro Paska, Thanksgiving, Halloween
Countertop, lakozia, Patio, efi-trano, efitra fandroana, efitra fatoriana, efitra fisakafoana, efitra fatoriana, fidirana, efitra fandraisam-bahiny, efitra ho an'ny ankizy, birao, lalantsara, ivelany, Desktop, efitra fikarakarana zazakely, efitra fanasan-damba
Minimalist, Contemporary, Traditional, Transitional, Rustic, Shabby Chic, Coastal, Scandinavian, Bohemian, Mid-Century Modern, Industrial, Eclectic, Farmhouse, Country, Art Decor, Asian Zen, Tropical, Vintage, Vaovao, Maraokana, Casual, Oriental, Ankizy, mpanao asa tanana, Atsimo Andrefana, CLASSIC, Modern, Glam, Morden Luxury
Disposable, maharitra, voatahiry
Shrinkwrap na namboarina
Ambongadiny alibaba voajanahary black slate lovia mofomamy
Famaritana: ambongadiny alibaba voajanahary mainty slate lovia mofomamy
Item No.: 13102-1
refy: 38*25*0.6cm na fanao
vita: Manjavozavo/voatapatapaka, ambonin'ny voajanahary
Fonosana: shrinkwrap / ropewrap / boaty volontany / boaty fanomezana
Famantarana: fanontam-pirinty tamin'ny laser/silkscreen/UV
Seranana fandefasana: Ningbo/Shanghai/Jiujiang
Ora nanomezana: 30 andro
Fepetra fandoavam-bola: T/T na L/C
Hijery Coasters bebe kokoa
Izahay dia mitazona ny endrika voajanahary amin'ny slate miaraka amin'ny loko madio amin'ny endrika sy habe samihafa ho an'ny safidin'ny mpanjifa. Ny antsipiriany tsirairay dia maneho tanteraka ny fananana anatiny sy ny kalitao ara-javakanto amin'ny slate izay mety tsara amin'ny haingon-trano anatiny sy ivelany.
F: Vato voajanahary ve izany?
A: Eny, ny tapany rehetra dia vita amin'ny takelaka voajanahary, vita tanana amin'ny sisiny maranitra na tapaka. Ny takelaka misy anay dia miavaka amin'ny endrika, ara-nofo, loko, izay midika fa tsy misy tapa-damba roa mitovy.
F: Marefo ve ny slate? Ho tapaka ve izany raha alatsako?
a.: Ny hamafin'ny porcelain na vera. Ny takelaka slate 5-6mm mahazatra dia afaka mitantana manana im-polony ny lanjany manokana eo amboniny. Izany no mahatonga antsika hanapaka azy manify ka tsy ho mora vaky. Mety ho tapaka anefa izy io raha voadona mafy amin’ny zavatra mafy na milatsaka amin’ny tany mafy. Raha raisinao toy ny lovia an-dakozia na vera ianao, dia mety tsara izany.
F: Ahoana no hanadiovana ny slate?
A: Esory mora foana amin'ny sponjy mando na savony tsy miandany mba hodiovina. Ny takelaka slate, raha tsy misy tongotra EVA eo ambany, dia ho azo antoka ny fanasan-damba.
teo aloha: Revolution Stone Slate Biscuit Kitchen Dessert Mooncake Lovia karakaraina roa ambaratonga
Manaraka: 2021 Vokatra vaovao ambongadiny Slate fromazy marika Haingo ho an'ny sakafo
Grace Designs Dinnerware Bamboo miendrika manokana ...
Shrinkwrap / volontsôkôlà boaty / boaty fanomezana Packaging slate c...
2021 New Product Vintage Round Marbra Wall Cloc...
Factory Direct Sales Vorombola hazo manompo Woo ...
2021 Fironana vaovao Classic Elegance Haingo Slat...
Lovia fromazy vita amin'ny hazo vaovao misy antsy 3